နိုင်ငံတကာပုံမှန်လေကြောင်းခရီးစဉ်များဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်မည့် ခရီးသွားများအတွက် ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ (၁၅-၆-၂၀၂၂)
Public Health Requirements for Travelers Entering Myanmar through International Commercial Flight (15-6-2022)
ကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်ခရီးစဉ် Relief Flight နှင့် ဝင်ရောက်လာမည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် အသွားအလာကန့်သတ်မှုနှင့် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ် (၁၅-၆-၂၀၂၂)
Testing and Quarantine Requirements for Travelers to Myanmar by Relief Flight (15-6-2022)
Update at 16/06/2022
Updated at 15/06/2022
The Department of Civil Aviation has informed airlines operating international air services to and from Myanmar that the Ministry of Health has approved two more COVID 19 vaccines produced in India, COVOVAX (NVx-CoV2372) and CorBEvaxTM, for international travellers to Myanmar.
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ထုတ်လုပ်သော COVOVAX (NVx-CoV2372) နှင့် CorBEvaxTM တို့ကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်မည့် နိုင်ငံတကာခရီးသွားများအတွက် ကိုဗစ် ၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးများအဖြစ် တိုးချဲ့အသိအမှတ်ပြုပြီးဖြစ်ကြောင်းကို လေကြောင်းပို့ဆောင်‌ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက မြန်မာနိုင်ငံ မှ/သို့ နိုင်ငံတကာလေကြောင်းခရီးစဉ်များ ပျံသန်းပြေးဆွဲလျက်ရှိ သော လေကြောင်းလိုင်းများသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
Updated at 05/06/2022
"နိုင်ငံတကာလေကြောင်းခရီးစဉ်များဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်မည့် ခရီးသွားများအတွက် ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ (၁-၅-၂၀၂၂) ကို ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ၂၉-၄-၂၀၂၂ ရက်နေ့ တွင် ထုတ်ပြန်"
"The Ministry of Health issued, on 29 April 2022, the Public Health Requirements for Travelers Entering Myanmar Through International Flights (1-5-2022)"
ကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်ခရီးစဉ် (relief flight) များဖြင့် ဝင်ရောက်လာမည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ အတွက် အသွားအလာကန့်သတ်မှုနှင့် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ် (၁-၅-၂၀၂၂) ကို ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ၂၉-၄-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်"
"The Ministry of Health issued, on 29 April 2022, Testing and Quarantine Requirements for Travelers to Myanmar by Relief flight (1-5-2022)"
Updated at 01/05/2022
Relief Flight နှင့် နယ်စပ်ဝင်/ထွက်ဂိတ်များမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်လာမည့် ခရီးသွားများအတွက် အသွားအလာကန့်သတ်မှုနှင့် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ် (၂၂-၄-၂၀၂၂)
Testing and Quarantine Requirements for Travellers to Myanmar by relief flight and cross border PoEs (22-4-2022)
Updated at 24/04/2022
ခရီးသွားများအတွက် သတ်မှတ်ဟိုတယ်များနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဝက်ဘ်ဆိုက် [https://tourism.gov.mm/mm/quarantine-hotels/] တွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။
Detailed information regarding hotels designated for travelers are available at the Ministry of Hotel and Tourism's website [https://tourism.gov.mm/quarantine-hotels/]
Updated at 15/04/2022
နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားများ ဝယ်ယူရမည့် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအာမခံနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း၏ ဝက်ဘ်ဆိုက် [Myanma Insurance (mminsurance.gov.mm)] တွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။
Detailed information regarding COVID-19 medical insurances to be purchased by foreign travelers are available at Myanma Insurance's website [Myanma Insurance (mminsurance.gov.mm)].
ဗီဇာ လိုအပ်ချက်/ကင်းလွတ်ခွင့်များနှင့် အခြားဗီဇာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက် အလက်များကို လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၏ ဝက်ဘ်ဆိုက် [https://evisa.moip.gov.mm/] တွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။
Detailed Information regarding visa requirements/exemptions and other visa-related matters are available at the website of Ministry of Immigration and Population [https://evisa.moip.gov.mm/].
Updated : 14/04/2022
"နိုင်ငံတကာလေကြောင်းခရီးစဉ်များဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ဝင်ရောက်မည့် ခရီး သွားများအတွက် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များကို ၇-၄-၂၀၂၂ ရက်စွဲဖြင့် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်" Read More Details...
"The Ministry of Health has issued the Public Health Requirements for Travelers Entering Myanmar Through Air Transport dated7April 2022" Read More Details...
COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရာခိုင်နှုန်း မြင့်မားလာခြင်းကြောင့် ပြည်တွင်းလေကြောင်း ခရီးစဉ် များ ပြေးဆွဲမှုကို ယာယီရပ်ဆိုင်းစေထားသော ကလေးမြို့တွင် ယခုအခါ ရောဂါဖြစ်ပွားမှု ကျဆင်းလာသဖြင့် ခရီးသွားပြည်သူလူထု အဆင်ပြေချောမွေ့မှု ရှိစေရေးအတွက် အဆိုပါ ပြည်တွင်းပုံမှန်လေကြောင်းခရီးစဉ်များ ပြေးဆွဲရာတွင် လေကြောင်းလိုင်းဝန်ထမ်းများ၊ လေဆိပ်ဝန်ထမ်းများနှင့် လေယာဉ်စီးခရီးသည်များ လိုက်နာရမည့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်များ (Version 2.6) နှင့်အညီ ခရီးစဉ်များကို ပြေးဆွဲခွင့်ပြုကြောင်း ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အကြောင်းကြားမှုအရ ဤဦးစီးဌာနက လေကြောင်းလိုင်းများကို အကြောင်းကြားထားပါသည်။
နိုင်ငံတကာ ခရီးသည်တင်လေကြောင်းခရီးစဉ်များ မြန်မာနိုင်ငံ မှ/သို့ ပျံသန်းခြင်းကို ပြန်လည်ဆောင် ရွက်ခွင့်ပြုမည်
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ၁၉-၃-၂၀၂၂ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်သော ကြေညာချက် (Lifting the Temporary Measures to Prevent Importation of COVID-19 to Myanmar through Air Travel) ကို လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက ၁၉-၃-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် Circular 3/2022 ထုတ်ပြန်၍ မြန်မာနိုင်ငံ မှ/သို့ နိုင်ငံတကာခရီးစဉ် ပျံသန်းသည့် လေကြောင်းလိုင်းများထံသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ကြေညာချက်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသ ရေးဗဟိုကော်မတီက မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံတကာခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖွံ့‌ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့် မြန်မာ နိုင်ငံသို့ လာရောက်မည့် နိုင်ငံခြားသားများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ နိုင်ငံတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ရာတွင် လွယ်ကူချောမွေ့စေရန်အတွက် အောက်ပါတို့ကို သဘောတူအတည်ပြုပြီးဖြစ်ကြောင်း ပါရှိပါသည်-
(က) Temporary Measures ၏ သက်ရောက်မှုကာလကို ၁၆-၄-၂၀၂၂ ရက်နေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် ၂၃၅၉ နာရီအထိ သတ်မှတ်ခြင်း၊
(ခ) နိုင်ငံတကာခရီးသည်တင် လေကြောင်းခရီးစဉ်များ (international commercial passenger flights) မြန်မာနိုင်ငံ မှ/သို့ ပျံသန်းမှုကို ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါဆိုင်ရာ ပြည်ဝင်ခွင့်စည်းကမ်းသတ် မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ၁၇-၄-၂၀၂၂ ရက်နေ့ (မြန်မာနှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့) မြန်မာစံတော်ချိန် ၀၀၀၀ နာရီမှစတင်၍ ပြန်လည်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
Department of Civil Aviation has issued Circular 3/2022 on 19 March 2022 to provide all airlines operating international air services to and from Myanmar withanotification of the Ministry of Health dated 19 March 2022 (Lifting the Temporary Measures to Prevent Importation of COVID-19 to Myanmar through Air Travel). In the notification, the Ministry of Health mentioned that the Central Committee for Prevention, Control and Treatment of COVID-19 has approved the followings, aiming at the developments of Myanmar's international tourism as well as at the facilitation of entries of Myanmar nationals and foreigners:
(a) The Temporary Measures will be effective up to 16 April 2022 2359 Hours MST; and
(b) The resumptions of international commercial passenger flights operations to and from Myanmar, with effect from 17 April 2022 (1st day of Myanmar New Year) 0000 Hours MST, under COVID-19 entry requirements and regulations established by the MOH, and guidance and/or instructions made by the other relevant authorities.
Update at 19/03/2022
နိုင်ငံတကာ ခရီးသည်တင်လေကြောင်းခရီးစဉ်များ မြန်မာနိုင်ငံ မှ/သို့ ပျံသန်းခြင်းကို ယာယီ ကန့်သတ်သည့် ညွှန်ကြားချက်၏ သက်ရောက်မှုကာလ တိုးမြှင့်သတ်မှတ်
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ၃၁-၁၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော Temporary Measures to Prevent Importation of COVID-19 to Myanmar through Air Travel (Issue 2) ၏ သက်ရောက်မှုကာလကို ၃၁-၃-၂၀၂၂ ရက်နေ့၊ မြန်မာစံတော်ချိန် ၂၃:၅၉ နာရီအထိ တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ကြောင်းကို လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက ၂၈-၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် Circular 2/2022 ထုတ်ပြန်၍ မြန်မာနိုင်ငံမှ/သို့ နိုင်ငံတကာခရီးစဉ် ပျံသန်းသည့် လေကြောင်းလိုင်းများသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ညွှန်ကြားချက်အရ နိုင်ငံတကာခရီးသည်တင် လေကြောင်းခရီးစဉ်များ (International Commercial Passenger Flights) မြန်မာနိုင်ငံမှ/သို့ ပျံသန်းခြင်းကို ယာယီဆိုင်းငံ့ထား ပါသည်။ သို့ရာတွင် အဆိုပါ ဆိုင်းငံ့မှုသည် ကယ်ဆယ်ရေး လေယာဉ်ခရီးစဉ်များ၊ ကုန်စည်တင် လေယာဉ်ခရီးစဉ်များ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကယ်ဆယ်ရေး လေယာဉ်ခရီးစဉ်များ၊ လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက သီးခြားခွင့်ပြုသည့် အထူးလေယာဉ် ခရီးစဉ်များနှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။
Department of Civil Aviation (DCA) has issued Circular 2/2022 on 28 February 2022 to inform all airlines operating international air services to and from Myanmar that the effective period of the Temporary Measures to Prevent Importation of COVID-19 to Myanmar through Air Travel (Issue-2) dated 31 December 2020 has been extended up to 31 March 2022 2359 Hours Myanmar Standard Time. Under the aforementioned Measures, operations of international commercial passenger flights to and from Myanmar are temporarily suspended. However, this suspension does not apply to relief flights, all-cargo flights, medical evacuation flights and special flights specifically approved by the DCA.
Updated at 01/03/2022
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ၃၁-၁၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော Temporary Measures to Prevent Importation of COVID-19 to Myanmar through Air Travel (Issue 2) ၏ သက်ရောက်မှုကာလကို ၂၈-၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့၊ မြန်မာစံတော်ချိန် ၂၃:၅၉ နာရီအထိ တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ကြောင်းကို လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက ၃၁-၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် Circular 1/2022 ထုတ်ပြန်၍ မြန်မာနိုင်ငံမှ/သို့ နိုင်ငံတကာခရီးစဉ် ပျံသန်းသည့် လေကြောင်းလိုင်းများသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ညွှန်ကြားချက်အရ နိုင်ငံတကာခရီးသည်တင် လေကြောင်းခရီးစဉ်များ (International Commercial Passenger Flights) မြန်မာနိုင်ငံမှ/သို့ ပျံသန်းခြင်းကို ယာယီဆိုင်းငံ့ထား ပါသည်။ သို့ရာတွင် အဆိုပါ ဆိုင်းငံ့မှုသည် ကယ်ဆယ်ရေး လေယာဉ်ခရီးစဉ်များ၊ ကုန်စည်တင် လေယာဉ်ခရီးစဉ်များ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကယ်ဆယ်ရေး လေယာဉ်ခရီးစဉ်များ၊ လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက သီးခြားခွင့်ပြုသည့် အထူးလေယာဉ် ခရီးစဉ်များနှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။
Department of Civil Aviation (DCA) has issued Circular 1/2022 on 31 January 2022 to inform all airlines operating international air services to and from Myanmar that the effective period of the Temporary Measures to Prevent Importation of COVID-19 to Myanmar through Air Travel (Issue-2) dated 31 December 2020 has been extended up to 28 February 2022 2359 Hours Myanmar Standard Time. Under the aforementioned Measures, operations of international commercial passenger flights to and from Myanmar are temporarily suspended. However, this suspension does not apply to relief flights, all-cargo flights, medical evacuation flights and special flights specifically approved by the DCA.
Update at 31/01/2022
ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ၃၁-၁၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော Temporary Measures to Prevent Importation of COVID-19 to Myanmar through Air Travel (Issue 2) ၏ သက်ရောက်မှုကာလကို ၃၁-၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့၊ မြန်မာစံတော်ချိန် ၂၃:၅၉ နာရီအထိ တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ကြောင်းကို လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီး ဌာနက ၃၁-၁၂-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် Circular 17/2021 ထုတ်ပြန်၍ မြန်မာနိုင်ငံ မှ/သို့ နိုင်ငံတကာခရီးစဉ် ပျံသန်းသည့် လေကြောင်းလိုင်းများသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားခဲ့ ပါသည်။ အဆိုပါ ညွှန်ကြားချက်အရ နိုင်ငံတကာခရီးသည်တင် လေကြောင်းခရီးစဉ်များ (International Commercial Passenger Flights) မြန်မာနိုင်ငံ မှ/သို့ ပျံသန်းခြင်းကို ယာယီ ဆိုင်းငံ့ထားပါသည်။ သို့ရာတွင် အဆိုပါ ဆိုင်းငံ့မှုသည် ကယ်ဆယ်ရေး လေယာဉ်ခရီးစဉ်များ၊ ကုန်စည်တင် လေယာဉ်ခရီးစဉ်များ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကယ်ဆယ်ရေး လေယာဉ်ခရီးစဉ်များ၊ လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက သီးခြားခွင့်ပြုသည့်အထူးလေယာဉ်ခရီးစဉ် များနှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။
Department of Civil Aviation (DCA) has issued Circular 17/2021 on 31 December 2021 to inform all airlines operating international air services to and from Myanmar that the effective period of the Temporary Measures to Prevent Importation of COVID-19 to Myanmar through Air Travel (Issue-2) dated 31 December 2020 has been extended up to 31 January 2022 2359 Hours Myanmar Standard Time. Under the aforementioned Measures, operations of international commercial passenger flights to and from Myanmar are temporarily suspended. However, this suspension does not apply to relief flights, all-cargo flights, medical evacuation flights and special flights specifically approved by the DCA.
Updated at 31/12/2021
ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ၃၁-၁၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော Temporary Measures to Prevent Importation of COVID-19 to Myanmar through Air Travel (Issue 2) ၏ သက်ရောက်မှုကာလကို ၃၁-၁၂-၂၀၂၁ ရက်နေ့၊ မြန်မာစံတော်ချိန် ၂၃:၅၉ နာရီအထိ တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ကြောင်းကို လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီး ဌာနက ၃၀-၁၁-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် Circular 16/2021 ထုတ်ပြန်၍ မြန်မာနိုင်ငံ မှ/သို့ နိုင်ငံတကာခရီးစဉ် ပျံသန်းသည့် လေကြောင်းလိုင်းများသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားခဲ့ ပါသည်။ အဆိုပါ ညွှန်ကြားချက်အရ နိုင်ငံတကာခရီးသည်တင် လေကြောင်းခရီးစဉ်များ (International Commercial Passenger Flights) မြန်မာနိုင်ငံ မှ/သို့ ပျံသန်းခြင်းကို ယာယီ ဆိုင်းငံ့ထားပါသည်။ သို့ရာတွင် အဆိုပါ ဆိုင်းငံ့မှုသည် ကယ်ဆယ်ရေး လေယာဉ်ခရီးစဉ်များ၊ ကုန်စည်တင် လေယာဉ်ခရီးစဉ်များ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကယ်ဆယ်ရေး လေယာဉ်ခရီးစဉ်များ၊ လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက သီးခြားခွင့်ပြုသည့်အထူးလေယာဉ်ခရီးစဉ် များနှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။
Department of Civil Aviation (DCA) has issued Circular 16/2021 on 30 November 2021 to inform all airlines operating international air services to and from Myanmar that the effective period of the Temporary Measures to Prevent Importation of COVID-19 to Myanmar through Air Travel (Issue-2) dated 31 December 2020 has been extended up to 31 December 2021 2359 Hours Myanmar Standard Time. Under the aforementioned Measures, operations of international commercial passenger flights to and from Myanmar are temporarily suspended. However, this suspension does not apply to relief flights, all-cargo flights, medical evacuation flights and special flights specifically approved by the DCA.
ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ၃၁-၁၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော Temporary Measures to Prevent Importation of COVID-19 to Myanmar through Air Travel (Issue 2) ၏ သက်ရောက်မှုကာလကို ၃၀-၁၁-၂၀၂၁ ရက်နေ့၊ မြန်မာစံတော်ချိန် ၂၃:၅၉ နာရီအထိ တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ကြောင်းကို လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီး ဌာနက ၃၁-၁၀-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် Circular 15/2021 ထုတ်ပြန်၍ မြန်မာနိုင်ငံ မှ/သို့ နိုင်ငံတကာခရီးစဉ် ပျံသန်းသည့် လေကြောင်းလိုင်းများသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားခဲ့ ပါသည်။ အဆိုပါ ညွှန်ကြားချက်အရ နိုင်ငံတကာခရီးသည်တင် လေကြောင်းခရီးစဉ်များ (International Commercial Passenger Flights) မြန်မာနိုင်ငံ မှ/သို့ ပျံသန်းခြင်းကို ယာယီ ဆိုင်းငံ့ထားပါသည်။ သို့ရာတွင် အဆိုပါ ဆိုင်းငံ့မှုသည် ကယ်ဆယ်ရေး လေယာဉ်ခရီးစဉ်များ၊ ကုန်စည်တင် လေယာဉ်ခရီးစဉ်များ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကယ်ဆယ်ရေး လေယာဉ်ခရီးစဉ်များ၊ လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက သီးခြားခွင့်ပြုသည့်အထူးလေယာဉ်ခရီးစဉ် များနှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။
Department of Civil Aviation (DCA) has issued Circular 15/2021 on 31 October 2021 to inform all airlines operating international air services to and from Myanmar that the effective period of the Temporary Measures to Prevent Importation of COVID-19 to Myanmar through Air Travel (Issue-2) dated 31 December 2020 has been extended up to 30 November 2021 2359 Hours Myanmar Standard Time. Under the aforementioned Measures, operations of international commercial passenger flights to and from Myanmar are temporarily suspended. However, this suspension does not apply to relief flights, all-cargo flights, medical evacuation flights and special flights specifically approved by the DCA.
Updated at 31/10/2021
ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ၃၁-၁၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော Temporary Measures to Prevent Importation of COVID-19 to Myanmar through Air Travel (Issue 2) ၏ သက်ရောက်မှုကာလကို ၃၁-၁၀-၂၀၂၁ ရက်နေ့၊ မြန်မာစံတော်ချိန် ၂၃:၅၉ နာရီအထိ တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ကြောင်းကို လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီး ဌာနက ၃၀-၉-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် Circular 14/2021 ထုတ်ပြန်၍ မြန်မာနိုင်ငံ မှ/သို့ နိုင်ငံတကာခရီးစဉ် ပျံသန်းသည့် လေကြောင်းလိုင်းများသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားခဲ့ ပါသည်။ အဆိုပါ ညွှန်ကြားချက်အရ နိုင်ငံတကာခရီးသည်တင် လေကြောင်းခရီးစဉ်များ (International Commercial Passenger Flights) မြန်မာနိုင်ငံ မှ/သို့ ပျံသန်းခြင်းကို ယာယီ ဆိုင်းငံ့ထားပါသည်။ သို့ရာတွင် အဆိုပါ ဆိုင်းငံ့မှုသည် ကယ်ဆယ်ရေး လေယာဉ်ခရီးစဉ်များ၊ ကုန်စည်တင် လေယာဉ်ခရီးစဉ်များ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကယ်ဆယ်ရေး လေယာဉ်ခရီးစဉ်များ၊ လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက သီးခြားခွင့်ပြုသည့်အထူးလေယာဉ်ခရီးစဉ် များနှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။
Department of Civil Aviation (DCA) has issued Circular 14/2021 on 30 September 2021 to inform all airlines operating international air services to and from Myanmar that the effective period of the Temporary Measures to Prevent Importation of COVID-19 to Myanmar through Air Travel (Issue-2) dated 31 December 2020 has been extended up to 31 October 2021 2359 Hours Myanmar Standard Time. Under the aforementioned Measures, operations of international commercial passenger flights to and from Myanmar are temporarily suspended. However, this suspension does not apply to relief flights, all-cargo flights, medical evacuation flights and special flights specifically approved by the DCA.
Updated at 01/10/2021
ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ၃၁-၁၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော Temporary Measures to Prevent Importation of COVID-19 to Myanmar through Air Travel (Issue 2) ၏ သက်ရောက်မှုကာလကို ၃၀-၉-၂၀၂၁ ရက်နေ့၊ မြန်မာစံတော်ချိန် ၂၃:၅၉ နာရီအထိ တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ကြောင်းကို လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီး ဌာနက ၃၀-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် Circular 13/2021 ထုတ်ပြန်၍ မြန်မာနိုင်ငံ မှ/သို့ နိုင်ငံတကာခရီးစဉ် ပျံသန်းသည့် လေကြောင်းလိုင်းများသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားခဲ့ ပါသည်။ အဆိုပါ ညွှန်ကြားချက်အရ နိုင်ငံတကာခရီးသည်တင် လေကြောင်းခရီးစဉ်များ (International Commercial Passenger Flights) မြန်မာနိုင်ငံ မှ/သို့ ပျံသန်းခြင်းကို ယာယီ ဆိုင်းငံ့ထားပါသည်။ သို့ရာတွင် အဆိုပါ ဆိုင်းငံ့မှုသည် ကယ်ဆယ်ရေး လေယာဉ်ခရီးစဉ်များ၊ ကုန်စည်တင် လေယာဉ်ခရီးစဉ်များ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကယ်ဆယ်ရေး လေယာဉ်ခရီးစဉ်များ၊ လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက သီးခြားခွင့်ပြုသည့်အထူးလေယာဉ်ခရီးစဉ် များနှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။
Department of Civil Aviation (DCA) has issued Circular 13/2021 on 30 August 2021 to inform all airlines operating international air services to and from Myanmar that the effective period of the Temporary Measures to Prevent Importation of COVID-19 to Myanmar through Air Travel (Issue-2) dated 31 December 2020 has been extended up to 30 September 2021 2359 Hours Myanmar Standard Time. Under the aforementioned Measures, operations of international commercial passenger flights to and from Myanmar are temporarily suspended. However, this suspension does not apply to relief flights, all-cargo flights, medical evacuation flights and special flights specifically approved by the DCA.
ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ၃၁-၁၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော Temporary Measures to Prevent Importation of COVID-19 to Myanmar through Air Travel (Issue 2) ၏ သက်ရောက်မှုကာလကို ၃၁-၈-၂၀၂၁ ရက်နေ့၊ မြန်မာစံတော်ချိန် ၂၃:၅၉ နာရီအထိ တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ကြောင်းကို လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီး ဌာနက ၃၀-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် Circular 12/2021 ထုတ်ပြန်၍ မြန်မာနိုင်ငံ မှ/သို့ နိုင်ငံတကာခရီးစဉ် ပျံသန်းသည့် လေကြောင်းလိုင်းများသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားခဲ့ ပါသည်။ အဆိုပါ ညွှန်ကြားချက်အရ နိုင်ငံတကာခရီးသည်တင် လေကြောင်းခရီးစဉ်များ (International Commercial Passenger Flights) မြန်မာနိုင်ငံ မှ/သို့ ပျံသန်းခြင်းကို ယာယီ ဆိုင်းငံ့ထားပါသည်။ သို့ရာတွင် အဆိုပါ ဆိုင်းငံ့မှုသည် ကယ်ဆယ်ရေး လေယာဉ်ခရီးစဉ်များ၊ ကုန်စည်တင် လေယာဉ်ခရီးစဉ်များ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကယ်ဆယ်ရေး လေယာဉ်ခရီးစဉ်များ၊ လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက သီးခြားခွင့်ပြုသည့်အထူးလေယာဉ်ခရီးစဉ် များနှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။
Department of Civil Aviation (DCA) has issued Circular 12/2021 on 30 July 2021 to inform all airlines operating international air services to and from Myanmar that the effective period of the Temporary Measures to Prevent Importation of COVID-19 to Myanmar through Air Travel (Issue-2) dated 31 December 2020 has been extended up to 31 August 2021 2359 Hours Myanmar Standard Time. Under the aforementioned Measures, operations of international commercial passenger flights to and from Myanmar are temporarily suspended. However, this suspension does not apply to relief flights, all-cargo flights, medical evacuation flights and special flights specifically approved by the DCA.
ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ၃၁-၁၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော Temporary Measures to Prevent Importation of COVID-19 to Myanmar through Air Travel (Issue 2) ၏ သက်ရောက်မှုကာလကို ၃၁-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့၊ မြန်မာစံတော်ချိန် ၂၃:၅၉ နာရီအထိ တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ကြောင်းကို လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီး ဌာနက ၃၀-၆-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် Circular 11/2021 ထုတ်ပြန်၍ မြန်မာနိုင်ငံ မှ/သို့ နိုင်ငံတကာခရီးစဉ် ပျံသန်းသည့် လေကြောင်းလိုင်းများသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားခဲ့ ပါသည်။ အဆိုပါ ညွှန်ကြားချက်အရ နိုင်ငံတကာခရီးသည်တင် လေကြောင်းခရီးစဉ်များ (International Commercial Passenger Flights) မြန်မာနိုင်ငံ မှ/သို့ ပျံသန်းခြင်းကို ယာယီ ဆိုင်းငံ့ထားပါသည်။ သို့ရာတွင် အဆိုပါ ဆိုင်းငံ့မှုသည် ကယ်ဆယ်ရေး လေယာဉ်ခရီးစဉ်များ၊ ကုန်စည်တင် လေယာဉ်ခရီးစဉ်များ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကယ်ဆယ်ရေး လေယာဉ်ခရီးစဉ်များ၊ လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက သီးခြားခွင့်ပြုသည့်အထူးလေယာဉ်ခရီးစဉ် များနှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။
Department of Civil Aviation (DCA) has issued Circular 11/2021 on 30 June 2021 to inform all airlines operating international air services to and from Myanmar that the effective period of the Temporary Measures to Prevent Importation of COVID-19 to Myanmar through Air Travel (Issue-2) dated 31 December 2020 has been extended up to 31 July 2021 2359 Hours Myanmar Standard Time. Under the aforementioned Measures, operations of international commercial passenger flights to and from Myanmar are temporarily suspended. However, this suspension does not apply to relief flights, all-cargo flights, medical evacuation flights and special flights specifically approved by the DCA.
ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ၃၁-၁၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော Temporary Measures to Prevent Importation of COVID-19 to Myanmar through Air Travel (Issue 2) ၏ သက်ရောက်မှုကာလကို ၃၀-၆-၂၀၂၁ ရက်နေ့၊ မြန်မာစံတော်ချိန် ၂၃:၅၉ နာရီအထိ တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ကြောင်းကို လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက ယနေ့တွင် Circular 10/2021 ထုတ်ပြန်၍ မြန်မာနိုင်ငံ မှ/သို့ နိုင်ငံတကာခရီးစဉ်ပျံသန်းသည့် လေကြောင်းလိုင်းများသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါညွှန်ကြားချက်အရ နိုင်ငံတကာ ခရီးသည်တင်လေကြောင်းခရီးစဉ်များ (International Commercial Passenger Flights) မြန်မာနိုင်ငံ မှ/သို့ ပျံသန်းခြင်းကို ယာယီဆိုင်းငံ့ထားပါသည်။ သို့ရာတွင် အဆိုပါ ဆိုင်းငံ့မှုသည် ကယ်ဆယ်ရေး လေယာဉ်ခရီးစဉ်များ၊ ကုန်စည်တင် လေယာဉ်ခရီးစဉ်များ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကယ်ဆယ်ရေး လေယာဉ်ခရီးစဉ်များ၊ လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြား မှုဦးစီးဌာနက သီးခြားခွင့်ပြုသည့် အထူးလေယာဉ်ခရီးစဉ်များနှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။
Department of Civil Aviation (DCA) has issued Circular 10/2021 today to inform all airlines operating international air services to and from Myanmar that the effective period of the Temporary Measures to Prevent Importation of COVID-19 to Myanmar through Air Travel (Issue-2) dated 31 December 2020 have been extended up to 30 June 2021 2359 Hours Myanmar Standard Time. Under the aforementioned Measures, operations of international commercial passenger flights to and from Myanmar are temporarily suspended. However, this suspension does not apply to relief flights, all-cargo flights, medical evacuation flights and special flights specifically approved by the DCA.
ပြည်တွင်းလေဆိပ်မြို့ (၆) မြို့သို့ ပျံသန်းလျက်ရှိသည့် လေကြောင်းခရီးစဉ်များ ယာယီရပ်ဆိုင်းမည်၊
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း) တို့တွင် COVID-19 ရောဂါ ပိုးတွေ့ရာခိုင်နှုန်း မြင့်မားလာခြင်း၊ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများဖြစ်ကြသည့် အိန္ဒိယနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့တွင် COVID-19 ရောဂါ အသွင်ပြောင်းပိုး တွေ့ရှိရခြင်းတို့ကြောင့် အဆိုပါ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များရှိ ကလေးမြို့၊ ထားဝယ်မြို့၊ မြိတ်မြို့၊ ကော့သောင်း မြို့၊ တာချီလိတ်မြို့နှင့် ကျိုင်းတုံမြို့များသို့ ပြေးဆွဲလျက်ရှိသည့် ပြည်တွင်းလေကြောင်းခရီး စဉ်များကို ယာယီရပ်ဆိုင်းပေးနိုင်ပါရန် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ညှိနှိုင်း အကြောင်းကြားမှုနှင့် ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ထပ်ဆင့်အကြောင်း ကြားမှုအရ ဤဦးစီးဌာနအနေဖြင့် လေကြောင်းလိုင်းများအား ကလေး၊ ထားဝယ်၊ မြိတ်၊ ကော့သောင်း၊ တာချီလိတ်နှင့် ကျိုင်းတုံမြို့များသို့ ပြည်တွင်းလေကြောင်းခရီးစဉ်များ ပြေးဆွဲ ခြင်းကို ယာယီရပ်ဆိုင်းရန် အကြောင်းကြားထားပါသည်။
(1) MAI Inspections
လေကြောင်း လုံခြုံမှုစစ်ဆေး ရေးဌာနခွဲမှ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာ့လေကြောင်းသို့ သွားရောက်စစ်ဆေး မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ၊
(2) MNA Inspections
လေကြောင်းလုံခြုံမှု စစ်ဆေးရေးဌာနခွဲမှ မြန်မာ့အမျိုးသားလေကြောင်း လိုင်းများသို့ သွားရောက်စစ်ဆေးမှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ၊
(3) X-Ray Screener CBT Recertification Course
လေကြောင်းပညာသိပ္ပံတွင် ဖွင့်လှစ်ပိုချခဲ့သည့် X-Ray Screener CBT Recertification Course သင်တန်းဖွင့်လှစ် ပို့ချခဲ့မှုဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ၊
Circular Issued : No. 06/2021 : 31 March 2021
EXTENSION OF THE EFFECTIVE PERIOD OF THE TEMPORARY MEASURES TO PREVENT IMPORTATION OF COVID-19 TO MYANMAR THROUGH AIR TRAVEL (ISSUE-2)
Circular Issued : No. 24/2020 : 31 December 2020
TEMPORARY MEASURES TO PREVENT IMPORTATION OF COVID-19 TO MYANMAR TRHOUGH AIR TRAVEL ISSUE-2
Tender Winning List for Construction Tender 2020-2021